ပြည်သူလူထုဘက်ကရပ်တည်ခဲ့လို့သူမတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို နိုင်ငံပိုင်သိမ်းဆည်းခံရဖွယ်ရှိနေတဲ့ မင်းသမီးခိုင်သင်းကြည်တို့မိသားစု – Cele Top Stars
ပြည်သူလူထုဘက်ကရပ်တည်ခဲ့လို့သူမတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို နိုင်ငံပိုင်သိမ်းဆည်းခံရဖွယ်ရှိနေတဲ့ မင်းသမီးခိုင်သင်းကြည်တို့မိသားစု
April 11, 2021 By admin2News
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည် ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဒီနေ့ဒီချိန်အထိ အနုပညာ လမ်းကြောင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရပ်တည်နေခဲ့ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေပါ ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပါပဲနော်။ မင်းသမီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ အေးဆေး နေနိုင်ပေမယ့်လည်း ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မကြားမှာ ဓမ္မဘက်ကနေ အခိုင်အမာ ရပ်တည်ခဲ့သူပါပဲနော်။
သူမရဲ့ ဖခင်မှာ စစ်တပ်မှ အရာရှိ အငြိမ်းစား တစ်ဦး ဖြစ်ပေမယ့်လည်း နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ဥပဒေအရ အရေးယူခံရဖွယ် ရှိနေတဲ့အပြင် သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကိုပါ နိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ် သိမ်းဆည်းခံရဖွယ် ရှိနေတယ်လို့ လူမှုကွန်ယက်တွင် သတင်းတွေ ပျံ့နှံ့နေတာပါနော်။ ” ဘယ်လိုတွေေ တာင်လဲဟယ်!!
သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည် ….ခိုင်သင်းကြည်၏ …. အမျိုးသား …. ခန့်နိုင် ….ခိုင်သင်းကြည်၏ …. သမီးဖြစ်သူ ….. စံထိပ်ထားဦး …..၎င်းတို့ ၃ ဦးသည် …. CDM ပြုလုပ်ရန် ….လှုံ့ဆော်ခြင်း …. CRPH အားထောက်ခံခြင်း ….ဆူပူအုံကြွမှုများဖြစ်ရန် ….အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ရန် …. လှုံဆော်ခြင်း … နိုင်ငံတော် ….အကြီးအကဲများအား …. စော်ကား …..ပုတ်ခတ်ခြင်း ….. တို့ကြောင့် …..၎င်းတို့ ၃ ဦးအား …. ဥပဒေအရ ….
ထိရောက်စွာ …. အရေးယူသွားမည် …..ယင်းအပြင် …. မိသားစုပိုင် …. စီးပွားရေး … လုပ်ငန်းများအား ….နိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ် …. ချိတ်ပိတ် ….သိမ်းဆည်း …. သွားမည် …. ” လို့ Facebook ပေါ်တွင် ရေးသားတာ မြင်တွေ့နေရပေမယ့် အတည်ပြု လို့တော့ မရသေးပါဘူး ပရိသတ်ကြီးရေ….
မင်းသမီးနန်းခင်ဇေယျာရဲ့လုပ်ရက်တွေကို အချိန်မှီရပ်တန့်ပေးဖို့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သတိပေးလိုက်တဲ့ ပြည်သူ့ဘက်တော်သား Hacker အဖွဲ့
သိန်း(၂၀) နဲ့လေလံအောင်သွားခဲ့တဲ့ ရဲတိုက်ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ N.A.K.E.D ပန်းချီကားလေး